Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Sustainability News » Ejikọtara Ike Njem Ọhụrụ Na -eme njem nlegharị anya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Njem nleta na -adigide na ume ọhụrụ
Njikọ ụlọ ọrụ nwere otu echiche, iji mepụta ụyọkọ synergetic abụghị ihe ọhụrụ. Ngosipụta a bụ ikwupụta ume ọhụrụ dị ka ihe ebumpụta ụwa na atụmatụ 'nkwado' nke njem & njem nlegharị anya… n'ọ̀tụ̀tụ̀ buru ibu.
Emebiela gburugburu anyị nke ukwuu, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọbịa tupu Covid-19 emewo ka ebe ndị njem nlegharị anya dị.
Ọ bụrụ na anyị gbakwunyere mmetọ mmetụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe gụnyere ọrịa na -efe efe, anyị maara ntakịrị ihe karịa mmepeanya n'okporo ụzọ.
Ịgbanwe mmiri site na fossil gaa na Energy Renewable pụtara ịmalite na oke ala nke 'agbụ nkwado'.
A sị ka e kwuwe, Energy Renewable na-apụta site na mbọ ahịhịa dị iche iche dị n'ime obodo ọtụtụ iri afọ gara aga na isi ike 'green' dị mkpa ma gbasaa taa.
Ike Ọhụrụ bụ ebe obibi, kwụụrụ onwe ya na enweghị oke; ọ dịghị mkpa ibu agha maka ya. Ha abụọ Njem njem nlegharị na Renewable Energy nwere otu echiche. N'iji mmetụta mkpali ha, ụlọ ọrụ abụọ ahụ na -agbakwụnye ma na -akwado ibe ha.
Ụzọ anyị maka nkwado na -egosipụta nke ọma na ọnọdụ anụ ahụ na ọdịdị nke anyị na gburugburu anyị. Mmetụta ahụ adịghị atọ ụtọ mgbe niile: ụlọ ndị na -emebi emebi, ebe ruru unyi na okporo ụzọ ndị jọrọ njọ, osimiri na -emebi emebi na ala jupụtara na karama plastik na mkpofu ndị ọzọ: ndị a na -egosi ihe na -egosi enweghị mmasị nke ọtụtụ mmadụ na ọtụtụ mkpebi ndị na -eme mkpebi.
Emebiela gburugburu anyị nke ukwuu n'ime afọ ndị gara aga, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọbịa tupu Covid-19 emeela mkpọchi okporo ụzọ na isi ihe ndị njem nlegharị anya. Ọ bụ ezie na ogologo oge gara aga, atụmatụ 'pristine landscapes' adịla mma nke ukwuu maka ndị ọkachamara iji na ndị ọbịa ịzụta, mmetọ gburugburu ebe obibi na -emenye ụjọ nke ukwuu ịghọta: Ebe ọ bụ na entropy abụghị ihe megidere ike, mana enweghị ya, yabụ mmetọ abụghị ihe megidere ya. nke ịdị ọcha, mana enweghị ya.
Ọ bụrụ na anyị gbakwunyere mmetọ mmetụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe na ọgba aghara mmekọrịta ọha na eze, akụ na ụba na ahụike nke oge a, gụnyere oria ojoo, anyị maara na ọ bụ ihe na-erughị mmepeanya n'okporo ụzọ, jupụtara na arụmụka na-ese okwu na ebe nrụpụta ihe ịma aka. Ajụjụ bụ, ebe aga -ebido, ọ gwụla ma ọ bụrụ na ọdachi ndị a na -atụghị anya ya ekpebie ime ihe ngwa ngwa?
A na-eji ike ọ bụla eme ihe ọ bụla-na-enweghị ume, enwere naanị entropy, ọnọdụ kwụ ọtọ. Ike - nke ike atọm, osisi na kol, ma ọ bụ mmanụ na gas kpaliri, emebeghị isi ọwụwa na mba ndị mepere emepe nke ukwuu. Anyị maara gbasara inye ike dị ka 'site na oghere' dị ka enyere.
Otú ọ dị, na -enwe ntakịrị obi abụọ: Site na mmalite, ike atọm echewo ihu n'ihe ize ndụ nke radieshon na nsogbu nke ịchekwa irighiri nuklia. Ka a sịkwa ihe mere ike atọm ji bụrụ ihe kacha amasị ndị mmegharị ngagharị gburugburu ebe obibi, ọkachasị ebe ọnụọgụ nke ihe mberede ọkụ ọkụ nuklia gbakọtara, na Chernobyl nọ n'ọkwa ha kacha elu na 1986. O doro anya: Ọ bụ ezie na ike atọm enweghị ike ime ka ike gwụ ikuku na -ekpo ọkụ. iji udo eme ihe bụ ihe niile mana ọ nweghị mmerụ ahụ.
Ka ọ na -erule oge anyị ghọtakwara na ike fosil abụghị naanị na -emebi gburugburu ebe obibi anyị na ihu igwe anyị, mana enwere oke na ọnụnọ ha. Oge eruola ka a chọta ebe ọzọ a ga -esi nweta ume. Mmeghari ohuru dị ka ifufe na anyanwụ mere ka ọ dị elu na agendas ogbako ihu igwe, n'oge na -adịghịkwa anya, Renewable Energy ruru ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ na karịa nke ngụkọta ume. Ụzọ ahụ yiri ka ọ ghe oghe maka ọdịnihu ike dị ọcha, ma ọ bụrụ na enwebeghị nnukwu ihe mgbochi iji merie, buru ụzọ kwuo banyere mgbanwe ihu igwe na nsogbu nchekwa.